DAAWO: Lionel Messi Oo Garoonka Dhexdiisa Ku Bahdilay
Xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi ayaa garoonka dhexdiisa bahdilaad ugu geystay tababare ku-xigeenka Barcelona ee Eder Sarabia intii ay socotay ciyaartii ay barbarraha 2-2 ah la galeen Celta Vigo.
Barcelona ayaa laba dhibcood kusoo lumisay Abanca-Balaidos, waxaana mar kale laga hor joogsaday Lionel Messi inuu dhaliyo goolka 700aad ee xirfaddiisa ciyaareed, laakiin waxa uu sameeyey laba caawimood oo uu goolal u beddelay Luis Suarez.
Kooxda reer Catalonia oo isku qortay guusha ayaa daqiiqaddii 88aad uu Iago Aspas ka dhaliyey laag xor ah, waxaanay sidaas ku lumiyeen laba dhibcood oo ay hadda Real Madrid ka sarrayso, iyadoo uu horyaalkuna soo dhamaanayo oo lix ciyaarood ka hadhsan yihiin.
Kooxda tababare Zidane ayaa hoggaanka si buuxda ula wareegtay Axaddii markii ay 1-0 kaga adkaatay Espanyol oo Barcelona ka dhisan, waxaana libintaas ku hoggaamiyey Casemiro oo shabaqa taabsiiyey kubbad uu ka helay Karim Benzema.
Kulanka Celta Vigo oo markii uu dhamaaday la sheegay in ciyaartoyda kooxdu ay qolka lebbiska dhexdiisa kula murmeen tababaraha oo ay hadallo taagtaagan is dhaafsadeen, waxa caddaynta ugu weyn laga sii arkay bannaanka.
Ciyaarta oo socota, waqti loo baxay biyo cabbis ayuu tababare ku-xigeenka kooxda ee Eder Sarabia isku dayay inuu ciyaartoyda wax u sheego iyadoo uu halkaas taagnaa tababare Quique Setien oo ay u muuqatay inuu isagu u diray inuu la hadlo ciyaartoyda.
Luiz Suarez, goolhaye Ter Stegen iyo dhawr ciyaartoy oo kale ayuu Sarabia la hadlay ka hor intii aanu Lionel Messi halkaas soo gaadhin si uu uga qaato biyo uu cabbo.
Eder Sarabia ayaa Lionel Messi la hadlay, laakiin laacibka reer Argentine ayaa yasay oo la hadli waayey, waxaana ku xigay in tababare ku-xigeenku uu u qaatay in Messi aanu maqlayn oo uu dhinaciisa u dhaqaaqay, hase yeeshee Messi ayaa afka is qabtay oo iska sii dhaqaaqay.
Sida kaamirooyinka garoonku soo bandhigeen, Sarabia ayaa ka daba qayliyey Lionel Messi oo ku yidhi: “Messi…Messi…Messi”, laakiin laacibkan ayaan dheg u jalanq siin oo iska sii socday isaga oo maqlayaa hadalka tababare ku-xigeenkiisa.
Quique Setien ayaa isagu si toos ah ula socday waxa goobta ka dhacayay oo arkayey Messi oo u jawaabi la’ Sarabia, hase yeeshee waxay xiisaddu cirka isku shareertay markii ay ciyaartu barbarraha kusoo dhamaatay ee qulka lebbiska la isla galay, halkaas oo hadallo kulul la isku dhaafsaday.